Shwe Myanmar Room :: Common rm for2ladies
Common rm for2ladies
👭common room(if couple start March)for 2ladies (Available now)🏃🏼 Sembawnag MRT သို.6 မိနစ်သာ လမ်းလျှောက်ရပါသည်
ချက်ပြုတ်နိုင်ပြီးသန့်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပေးရပါမည်။ တယောက် $390 pub Internet gas အပြီးစီးကျပါမည်။ မိသားစုလိုကြိုဆိုပါသည်။🏕အိမ်ပြောင်းစရာမလိုဘဲနှစ်ရှည်နေနိုင်ပါသည်။commmon room ၂ခန်းလုံးမိန်းကလေးသီးသန့်မို့toilet ကိုမိနိးကလေးသီသန့်သုံးရမှာပါ🌂အိမ်မှ MRT အထိ အမိုးတောက်လျှောက်ရှိသဖြင့် နေပူ၊ မိုးရွာ ထီးမလိုပါ။
🌠new aircon ပါဝင်သော Fully Furnished အိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ည ၉:၄၅ မှ နံနက် ၆နာရီI အထိ air con အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
🛌တစ်ယောက်အိပ် မွေ့ယာ၊ ကုတင် /စားပွဲ/လိုက်ကာ/window glass sticker /ရေပူရေအေးစက်/2 door big size fridge/ပန်ကာ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။အသုံးလိုသောပစွည်းများထပ်ထည့်ပေးမည်. -High Speed Fibre Internet လိုင်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။
🙅🏼sun plaza Shopping Mall/Giant/7-eleven (24hr) ,ATMs, 2mins to Food Court တို့ရှိပါသည်။
🚍Bus Stop များမှာလည်း lift ကပ်လျက် 859, 962,858 တို့ရှိပါသည်။
✅Sembawang Shopping Center သို့လည်း shuttle bus ဖြင့်သွားနိုင်ပါသည်။
📍လိပ်စာမှာ - Blk 335, Sembawang Close.
- [ ] 📞စုံစမ်း၊ မေးမြန်းရန် ဖုန်းနံပါတ်များမှာ 85715969့ )ဖြစ်ပါသည်/short term2per $50 per day
Phone : 85715969
Nearest MRT : Sembawang
Available Date : 13-Jan-2018
Looking for Lady Roommate near Yishun MRT
looking foraGirl to share common room $290+pub @ boon keng mrt
Rent for 1 male at Clementi
BukitBatok : ShortTerm one female in common room at Bukit Batok MRT
looking foraGirl to share common room $290+pub @boon keng mrt
Pioneer : ( short term one week- available @ December) looking for one couple/ two male / two female to rent one big common room near/beside Pioneer Mrt